दसैंमा कुर्ती लगाउने सोच्दै हुनुहुन्छ? यी हुन् सदाबहार ५ डिजाइन :: जुना श्रेष्ठ :: Setopati
अचेल परम्परागत शैलीका लुगामा सारीसँगै लेहेंगा-चोली र कुर्ती पनि पर्छ। अझ कुर्ती हरेक उमेर समूहका महिलाको रोजाइमा पर्छ।
लगाउन छरितो र सजिलो, ट्रेन्डी र क्लासिक लुक पनि दिने भएकाले कुर्ती धेरै ग्राहकको रोजाइमा पर्ने व्यापारीहरू बताउँछन्। कुर्तीले बाह्रै मास बजार लिइरहेको हुन्छ। दसैं र अन्य चाडवाडमा माग अझै धेरै हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार कुर्ती ट्रेन्डिङमा रहे पनि अधिकांश ग्राहक कुर्ता र कुर्तीको फरक नपाएर अलमल देखिन्छन्।
कुर्ती र कुर्तामा के फरक छ त?
हुन त कुर्ता होस् वा कुर्ती, हामीकहाँ दुवै भारतबाट आएको हो। दक्षिण एसियाली देश जस्तै पाकिस्तान, अफगानिस्तानदेखि बंगलादेशसम्म लोकप्रिय।
सामान्यतया 'कुर्ता' भन्दा चाहिँ महिला तथा पुरुष दुवैले लगाउन मिल्ने, घुँडासम्मको लम्बाइ भएको कपडा हो। 'कुर्ती' चाहिँ महिलाहरूका लागि मात्र लक्षित बनाइन्छ। यो जुनकुनै लम्बाइमा हुन सक्छ भने शरीरमा मिल्दो नापमा बनाइन्छ। कुर्ता यसको आफ्नै सेटको सुरूवालमा लगाइन्छ भने कुर्ती सुरूवाल, प्यान्ट, लेगिङ्सदेखि स्कर्टमा पनि मिलाएर लगाउन सकिन्छ। तर अचेल कुर्ती पनि सेटमा लगाउने चलन बढेको छ।
हामीकहाँ कहिलेदेखि कुर्तीले बजार पायो भन्ने ठ्याक्कै इतिहास छैन। फेसन डिजाइनर रेनु श्रेष्ठ नेपाली समाज भारतीय समाजसँग नजिकिएसँगै भारतीय पहिरनबाट प्रभावित भएर कुर्ती नेपाली बजार भित्रिएको अड्कल काट्छिन्।
'नेपालमा कुर्ता/कुर्ती कहिले भित्रियो भन्ने थाहै छैन, यसका लागि नयाँ अनुसन्धान नै थाल्नुपर्ला,',रेनुले हाँस्दै भनिन्, 'तर निकै लामो समयदेखि हामीकहाँ विभिन्न डिजाइनका कुर्ती र कुर्ता देखिएको छ।'
बर्सेनि बजारमा सयौं डिजाइनका कुर्ती भित्रन्छन्। 'अमारा फेसन हाउस'बाट मात्रै हरेक वर्ष २०० बढी डिजाइन र रङमा कुर्ती भित्रिने यसका सञ्चालक आयुष अग्रवाल बताउँछन्।
विगत दस वर्षदेखि कुर्ती व्यवसायमा लागेका आयुषका अनुसार नेपाली बजार भारतीय बजारभन्दा अस्थिर छ। यहाँ प्रत्यक २-३ महिनामा फेसन र ट्रेन्ड बदलिरहन्छ। ग्राहकको माग अनुसार अमाराले भारतबाट आफ्नै उत्पादनमा कुर्ती भित्र्याउने उनले जानकारी दिए।
'हाम्रो बजारमा कुन डिजाइन चलिरहेको छ, भन्नै मिल्दैन। प्रत्येक महिना यहाँ फेसन फेरिन्छ। सेलेब्रेटीले लगाएको जस्तै डिजाइनर कुर्ती खोज्ने नभए आफ्नै डिजाइनमा सिलाउने पनि हुन्छन्,' आयुषले भने।
अमाराबाट भने भारतीय डिजाइनकै कुर्ती बिक्री हुन्छन्। अझ अहिले त कोरोना संक्रमणबाट बच्न अमाराले मास्कलाई पनि फेसनएबल बनाउने प्रयास गरेको छ।
आयुषका अनुसार अमाराले हालै 'कुर्ती विथ मास्क सेट' बजारमा भित्र्याएको छ। यो सेटमा कुर्तीकै डिजाइन र कपडाजस्तै मास्क पनि पाइन्छ। कहिले ज्याकेटसँग कुर्ती, कहिले सलसँग, अहिले स्कार्फसँग। समयअनुसार जे जसरी आए पनि ट्रेन्ड र फेसनबाट सजिलै नबाहिरिएका कुर्तीका यस्ता केही सेट छन्, जसको हामीले यहाँ चर्चा गरेका छौं।
यी विभिन्न डिजाइनमध्ये सदाबहार केही कुर्ती यस्ता छन्ः
अहिलेको पुस्ता लगाउँदा सहज हुने कपडामा आकर्षित छन्। कुनै समय जिउमा टपक्क मिल्ने लुगा रूचाउने वर्गले समेत अचेल खुकुलो, जिउमा नछुने लुगामा आँखा लगाउँछन्। त्यसैले पनि प्लाजो सेट बजारमा बढी बिक्री हुने डिजाइनभित्र पर्छ।
ट्र्याडिसनल एलेका सञ्चालक समेत रहेकी रेनुका अनुसार प्लाजो निकै सजिलो र हेर्दा क्लासिक देखिनाले प्रायः अफिस जानुपर्ने महिलाको रोजाइमा पर्दै आएको छ। यसको कुर्ती आफ्नो शरीरको नापअनुसार फिटिङ हुन्छ भने सुरूवाल खुकुलो हुन्छ। यसमा सल वा स्कार्फ लगाए पनि हुन्छ, नलगाए पनि फरक पर्दैन।
धापासीस्थित तारा क्लोदिङ कलेक्सनका सञ्चालक ममता तुलाधर पनि प्लाजोले राम्रो ग्राहक पाइरहेको बताउँछिन्। उनका अनुसार २५ देखि ५० वर्षका महिला प्लाजो सेटमा आकर्षित छन्। यो अफिस पहिरनका लागि मात्र नभई कुनै पर्व वा कार्यक्रममा लगाउँदा पनि राम्रो देखिन्छ।
लङ स्ट्रेट कुर्तीको ट्रेन्ड कहिल्यै बाहिरिएन। पहिले कुर्ती मात्रै 'टप्स' नामबाट बजार पाएको लङ स्ट्रेट कुर्ती डिजाइन अहिले 'कुर्ती सेट'मा चल्ने गरेको छ। यो डिजाइनको कुर्ती सामान्यतः जुन कपडा पसलमा पनि पाइन्छ।
घुँडाभन्दा तलसम्म हुने कुर्ती चुरिदार सुरूवाल, जिन्स प्यान्ट, खुकुलो सुरूवाल, लेगिंस् वा धोती सुरूवालसँग लगाउन मिल्छ। इच्छाअनुसार पुरा बाहुला, पाखुरासम्मको वा बाहुलै नभएको डिजाइनमा बनाउन सकिन्छ।
कपडाको फाइबर अनुसार यो कुर्ती हरेक कार्यक्रम तथा पर्वमा लगाउन सकिन्छ भने घर बस्दा सजिलो सुरूवालसँग लगाउन सकिन्छ। लङ स्ट्रेट कुर्ती अचेल युवा वर्गमा बढी चलेको डिजाइनर रेनु बताउँछिन्।
हाम्रो अनुहारको आकार अनुसार कुर्तीमा भी-कट, गोलो अथवा तुना हालेर सिलाउन सकिन्छ। तारा क्लोदिङ कलेक्सनका सञ्चालक ममताका अनुसार बजारमा अहिले यसप्रकारका कुर्ती 'प्यान्ट स्टाइल कुर्ती नामबाट बिक्री भइरहेको छ।
यो सेटको कुर्ती घुँडाभन्दा मासथि र कम्मरभन्दा हल्का तलसम्म हुन्छ। यसको सुरूवालमा मुजाहरू हुन्छ। पटियाला कुर्ती सेट लगाउँदा सहज र हेर्दा क्लासिक देखिनाले प्रायः घर-गृहिणी सम्हालिरहेका महिलाको रोजाइमा बढी पर्ने डिजाइनर रेनुले आफ्नो व्यापार अनुभव सुनाइन्।
यति बेला बजारमा साधारणभन्दा प्रिन्टेड (बुट्टेदार) कुर्ती बढी चल्ने अमारा फेसन हाउसका सञ्चालक आयुष बताउँछन्। उनका अनुसार विभिन्न डिजाइन र रंगन प्रिन्ट भएको कपडाको कुर्तीले केही महिनायता राम्रो बजार लिइरहेको छ। विभिन्न रङ मिसिएको कपडा जस्तै रातो र कालो, कुर्तीमा पनि ग्राहकको आकर्षण बढ्दो छ।
हेर्दा लङ स्ट्रेट कुर्ती डिजाइन जस्तै देखिने सरारा कुर्ती सेटको सुरूवाल खुलेको हुन्छ। तल्लो भाग मात्र हेर्दा यो कुनै लेहेंगा भन्दा कम देखिँदैन। घुँडाभन्दा हलुका तलदेखि यसको सुरूवाल बेल बटम जिन्सको जस्तै हुन्छ। आफ्नो इच्छा अनुसार कुर्ती भने छोटा/लामो बनाउँन सकिन्छ। यो खालको कुर्ती सेटमा प्रायः श्रवल हुन्छ। तर श्रवल नलाए पनि राम्रो देखिन्छ।
फेसन डिजाइनर रेनुका अनुसार उमेर अनुसार कुर्तीको रङ रोजाइमा पनि फरक पर्छ। बजारमा पाकिस्तानी डिजाइन भित्रिएसँगै हलुका रङका कुर्ती रोजाइमा पारेका छन्। भारतीय कुर्ती प्रायः गाढा रातो, निलो, पहेँलो हुन्थे भने पाकिस्तानी प्रायः बदामी, गुलाबी रङमा हुन्छन्।
यी पनि पढ्नुस्ः युवतीहरूको आकर्षणमा 'धोती सुरूवाल'
यी हुन् ट्रेन्डिङका ५ जिन्स प्यान्ट
प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक ६, २०७७, ०२:२१:००